Photocall TV: Esi lelee TV na gam akporo n'efu | Gam akporosis
Photocall TV: Esi lelee TV na gam akporo n'efu
Ignacio Lopez | 11/04/2021 20:00 | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Photocall.tv na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ puku ọwa telivishọn si n'akụkụ ụwa niile, na-akwụ ụgwọ kpamkpam na ngwaọrụ ọ bụla. N'ịbụ ibe weebụ ma ọ bụghị ngwa, ọ dịghị mkpa ịwụnye ngwa ọ bụla, yabụ na anyị ekwesịghị ịmara banyere imelite ya oge niile.
Taa, ọnụ ọgụgụ nke ọrụ anyị nwere ike ime site na ama anyị dị elu nke na ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị ha elegharawo kọmputa anya, n’agbanyeghi na nke a ka di nkpa ime ihe ufodu nke sitere na ama ma obu mbadamba ihe agaghị ewe ogologo oge.
Lelee ọwa TV ọ bụla site na ebe ọ bụla, na-enye anyị ohere ịhụ ihe omume ọhụụ nke usoro ahụ masịrị anyị, egwuregwu bọọlụ, akụkọ kachasị ọhụrụ, ihe ngosi kachasị amasị anyị ... ma ọ bụ ọrụ, na njem njem n'ụzọ ma ọ bụ na-alọta ọrụ ... dị ka ọ bụrụhaala na anyị nwere njikọ ịntanetị, n'ụzọ doro anya.
Ọ bụ karịsịa bara uru mgbe ụmụ anyị chọrọ ịhụ ha mmasị usoro ma ndị ọzọ nke ezinụlọ chọrọ ịhụ ụdị ndị ọzọ nke ọdịnaya, ka mechaa kirie ihe nkiri tupu ị lakpuo ụra, iji hụ akụkọ kachasị ọhụrụ ...
1 Gịnị bụ Photocall TV
2 Kedu ọwa nke Photocall TV nwere
3 Ọ bụghị ihe niile ka ọ dị ka ọ dị
4 Ndị ọzọ na Photocall TV
4.1 Ngwa IPTV
4.3 Ngwa Channel
Gịnị bụ Photocall TV
Na Storelọ Ahịa Play anyị nwere n'aka anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa na-enye anyị ohere ikiri telivishọn site na ngwaọrụ ọ bụla. Nsogbu bụ na ngwa ndị a, nke nweere kpamkpam, choro mmezi na akụkụ nke onye nrụpụta na oge ụfọdụ, ebe ọ bụ ihe omume ntụrụndụ, ha anaghị akwụ ụgwọ nlebara anya dị mkpa.
Agbanyeghị, dịka m si kọwaa n'elu, Photocall.tv ọ bụ ibe weebụ, ibe weebụ na-enweghị mgbasa ozi ọ bụla nke na-enye anyị ohere ịnweta ọtụtụ puku ọwa telivishọn si n'akụkụ ụwa niile. Olee otú ọ ga-esi kwe omume?
Afọ ole na ole gara aga, ọtụtụ netwọk telivishọn na-agbasa na ịntanetị site na ibe weebụ ha, naanị ọdịnaya, ya bụ, mmemme mmemme na mmemme ha kere.
Mgbe ị na-ekiri ihe nkiri, n'ihi ihe dị iche iche nke nkwekọrịta dị n'etiti ụlọ ọrụ mmepụta na ọwa telivishọn, ma usoro na ihe nkiri, ekwusighi ha dika ndi ozo nke mmemme ha.
Ọ dabara nke ọma, nke ahụ gbanwere, ebe ọ bụ na ọ baghị uru ịgbasa naanị mmemme nke aka ya, mmemme nke na -emekarị obere mmasị. N'ihi mgbanwe a, ịga na webụsaịtị nke ọdụ ọ bụla, anyị nwere ike ịhụ site na ịntanetị otu ọdịnaya anyị na-enweta site na telivishọn.
Photocall.tv na-achịkọta njikọ niile na ibe weebụ n'otu ebe nke netwọk telivishọn n'otu ebe. Kpọmkwem na ibe weebụ ebe a na-agbasa ya na ndụ, yabụ na ọ dịghị mkpa ka ị gaa na ibe weebụ site na ibe weebụ iji hụ mgbasa ozi dị ndụ, naanị anyị ga-aga na Photocall.tv.
Kedu ọwa nke Photocall TV nwere
Agbanyeghị na webụsaịtị a na-elekwasị anya n'inye anyị ọtụtụ ọwa dị na Spain, gụnyere nke ndị niile kwurula obodo na ndị mpaghara ụfọdụ, ọ na-enyekwa anyị ohere ịnweta ọwa telivishọn si mba ndị ọzọ dịka Mexico, Argentina, Colombia, Venezuela, Peru, Chile, Panama, Paraguay, Ecuador, Honduras, United States, France, Italy, Germany ...
Iji nweta ndị ọzọ nke ọwa na-abụghị Spanish nke dị site na Photocall.tv, n'elu, anyị ga-pịa International. N'akụkụ a, ị ga-ahụ ọwa niile si mba ndị ọzọ. Nsogbu bụ na a naghị enye ha iwu n'ụzọ ọ bụla, ya mere, anyị ga-eji aka chọọ ma ọ bụ jiri nyocha ọchụchọ.
Nchọgharị ọchụchọ a dị n'aka nri nke menu nhọrọ dịnụ na bụ usoro kachasị mfe inwe ike ịnweta ọwa telivishọn anyị na-achọ na-enweghị ileba anya na akara channelụ n'otu n'otu.
Channelsfọdụ ọwa, anaghị enye ohere ịnweta ọdịnaya ma ọ bụrụ na ịnọghị na mba ahụ, ya mere a ga-amanye anyị iji VPN. Site na weebụsaịtị a, anyị nwere ohere inweta VPN dị iche iche, ha niile kwụrụ ụgwọ, ịbụ NordVPN otu kachasị mma.
Ọrụ nke Photocall.tv na-enye anyị naanị gụnyere ọwa telivishọn ọha na eze, ya bụ, ndị anaghị akwụ ụgwọ kpamkpam. Ọ bụrụ na ị na-achọ etu esi enweta TNT, Fox, AXN n'etiti ndị ọzọ, ị gaghị enwe ike ịme ya site na ibe weebụ a, yabụ ị ga-enwerịrị tụgharịa na ndepụta iptv iji ngwa dị otú ahụ.
Ọ bụghị ihe niile ka ọ dị ka ọ dị
Ka m siri kwu, iji Photocall.tv bu kpamkpam n'efu, Ọ dịghị mkpa ịkwụ ụgwọ ụdị ndenye aha ọ bụla, ebe ọ bụ na ọdịnaya ọ na-enye anyị dị site na weebụsaịtị nke ọwa telivishọn dị iche iche.
Ọ bụrụ na anyị nweta site na ama anyị, ọ ga-adị mma ka anyị jiri a ihe nchọgharị nke gụnyere ihe mgbasa ozi, ebe ọ bụ na ọ bụghị, windo dị iche iche ga-emeghe ịkpọ anyị ka anyị wụnye ngwa iji mụta ọdịnaya ahụ.
Ngwa ndị a Ha adịghị mkpa, yabụ anyị ga-akagbu arịrịọ ọ bụla iji budata ọdịnaya yana taabụ niile na-egosighi ọwa telivishọn anyị chọrọ.
Ihe ngwọta kachasị mfe iji zere ihe egwu na ịwụnye ngwa n'amaghị na ọ bụ iji ihe nchọgharị Nwere Obi Ike, ihe nchọgharị n'efu nke gụnyere ihe mgbasa ozi na gbochie ibe weebụ ndị ọzọ na ọdịnaya obi na-emeghe mgbe anyị pịrị na ọwa anyị chọrọ ịhụ.
Nwere Nchọgharị n'onwe Nwere Obi Ike: Nchọgharị Weebụ Nke Onwe
Developer: Software Nwere Obi Ike
Ndị ọzọ na Photocall TV
Y’oburu n’achoghi otu webusaiti a n’aru dika ichoro iji ngwa, ihe kachasị mfe maka iji ndepụta IPTV / M3U.
Ọ bụrụ na ịchọọ na ịntanetị maka "ndepụta iptv" anyị ga - ahụ njikọ dị iche iche na ụdị ndepụta a anyị nwere ike ibubata na ngwa IPTV nwee ike ịnụ ụtọ ọwa TV anyị kacha amasị anyị. Mana na mgbakwunye, anyị nwekwara ike ịchọta ndepụta nke gunyere ọwa dị naanị site na ịkwụ ụgwọ, ndepụta ndị megidere iwu, yabụ ha na-ewekarị obere oge ịrụ ọrụ.
Obi abụọ adịghị ya, ihe ngwọta kachasị ọsọ na kachasị mfe iji nwee ike ịhụ mgbaàmà nke ọwa telivishọn ọha na eze dị ndụ bụ site na weebụsaịtị ya. Ọ bụrụ na anyị chọrọ izere ịchekwa adreesị weebụ nke ọwa niile na ihe nchọgharị anyị, anyị nwere ike mee ọchụchọ google oge ọ bụla anyị chọrọ ile otu ọwa.
Naanị anyị ga-abanye okwu ọchụchọ "Lee 1 dị ndụ". Site na ịpị njikọ a, ebe nrụọrụ weebụ RTVE ga-emeghe ebe a na-agbasa ọwa ahụ ndụ, na-enweghị anyị nwere ike ime ihe ọ bụla ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ igwe onyonyo nkeonwe nke na-agbasa ozi n'ihu ọhaNa mbu, a ga-egosipụta usoro ọkwa na, n'oge ụfọdụ, anyị nwere ike ịfefe, n'ikpeazụ a ga-egosi mgbasa ozi dị ndụ.
Imirikiti netwọk telivishọn na-enye ndị ọrụ niile ngwa ha nke ha nwere ike ịnweta ọwa niile ha na-agbasa. Ngwa ndị a na-enyekwa ohere ịnweta usoro na ihe nkiri niile nke mmepụta nke aka ha, yabụ ha bụ nhọrọ magburu onwe ya ma a bịa n'ịlele ọdịnaya nke ha gbasagoro.
ATRESplayer - Usoro, películas y TV online
Mitele - TV na-achọ
Developer: RTVE Medios mmekọrịta
Na Spain anyị nwere, na mgbakwunye na telivishọn ọha na eze RTVE, ndị Atresmedia na Mediaset.
Site na ngwa Atresmedia, anyị nwere ike ịnweta ọdịnaya nke ọwa:
Site na Mediaset, anyị nwere ike ịhụ:
Lọ ọrụ akụkọ ifo
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Photocall TV: Esi lelee TV na gam akporo n'efu
Ihe ngosi: gini bu ya, kedu ka o si aru oru na ihe o n’enye anyi n’adighi ka WhatsApp na Telegram
Egwuregwu ụmụaka 9 kachasị mma maka gam akporo